असार ३१ गते चन्द्रग्रहण लाग्दै, यी राशीलाई पर्नेछ ग्रहण हेरे यस्तो कस्टकर ? जानी राखौं – PathivaraOnline
Home > समाचार > असार ३१ गते चन्द्रग्रहण लाग्दै, यी राशीलाई पर्नेछ ग्रहण हेरे यस्तो कस्टकर ? जानी राखौं
असार ३१ गते चन्द्रग्रहण लाग्दै, यी राशीलाई पर्नेछ ग्रहण हेरे यस्तो कस्टकर ? जानी राखौं
काठमाडौं। असार ३१ गते मङ्गलबार आषाढ शुक्ल पूर्णिमाका दिन खण्डग्रास (आधा चन्द्रमा ढाक्ने) चन्द्रग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । ग्रहणले राति १ः४६ बजेदेखि आग्नेय कोण (पूर्व र दक्षिणको बीच) बाट स्पर्श गर्ने समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र पोखरेलले राससलाई जानकारी दिए । ३ः१५ मा ग्रहणको मध्यकाल हुनेछ । ४ः४५ मा मोक्षकाल अर्थात् ग्रहण सकिने उनले बताए ।